Ninebot MAX कालो इलेक्ट्रिक स्कूटर (65km को यात्राको लागि) बाट मूल्य ...
घरइलेक्ट्रिक परिवहनइलेक्ट्रिक स्कूटर, स्कूटरननबोट MAX ब्ल्याक इलेक्ट्रिक ब्ल्याक स्कूटर (65km)
(1 खरीदार प्रतिक्रिया)
इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्कूटरइलेक्ट्रिक परिवहन
अन्तिम अपडेट नोभेम्बर १२, २०२० ११::2020२
Ninebot MAX G30 Kickscooter Foldable स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 "व्हील k०km / h 30km दायरा डुअल ...
Xiaomi Ninebot MAX G30P इलेक्ट्रिक स्कूटर W 350०W मोटर अधिकतम k०kmh कालो
Ninebot KickScooter MAX G30 G30P Portable Folding इलेक्ट्रिक स्कूटर W 350०W मोटर अधिकतम गति k०km / h ...
मूल Ninebot अधिकतम G30 Kickscooter Foldable स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 व्हील 30km / h 65km दायरा ...
पूर्व बिक्री मूल Ninebot MAX G30 KickScooter 10 इन्च तह 65km अधिकतम माइलेज डबल ब्रेक ...
नाम: Ninebot MAX
सामाग्री: विमानन एल्यूमिनियम मिश्र धातु
अधिकतम गति: k०km / h;
अधिकतम सवारी दूरी: 64km
मोटर पावर: 350W
अधिकतम मोटर पावर: 700W
लोड: 100kg (तर उच्च वजनको साथमा एक व्यक्ति ड्राइभ गर्न सक्दछ)
ब्याट्री क्षमता: 551Wh
झुकावको कोण: ~ 15 डिग्री
चार्जर भोल्टेज: १०० - २100०V, /० / H० हर्ट्ज
ब्याट्री भोल्टेज: 42V
चार्ज गर्ने समय: ~6घण्टा
सहरी गतिशीलता क्रान्ति यहाँ छ। Segway-Ninebot, मजबूत टायर, र सबै इलाकाका लागि बनेको शरीरबाट सबैभन्दा लामो माईलेज फिचर गर्दै, अझै अझै सबैभन्दा आकर्षक मूल्यमा प्रस्ताव गरिएको छ, Ninebot KickScooter MAX यहाँ परिवर्तन ल्याउनका लागि छ। MAX सबै प्रकारका राइडरहरू, टेरेनहरू, र यात्राहरूको लागि आदर्श हो।
धेरै इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू सीमित माइलेज र ब्याट्री जीवनको समस्याको सामना गर्छन्। Ninebot KickScooter MAX ले 551 2१Wh को ब्याट्री क्षमताको साथ परिवर्तन गर्दछ जुन Ninebot KickScooter ES40 मा माईलेज लगभग तिगुनी गर्दछ। Miles० माईलको MAX दायराको साथ, तपाईं सजिलै सँग सवारी गर्न सक्नुहुन्छ १162२ बच्चाहरू एक मानक चल्ती ट्र्याक वरपर एकल चार्जमा, वा पूर्ण म्याराथन PLUS अर्को आधा म्याराथन पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको MAX मा काम गर्न यात्रामा हरियो जानुहोस् र हप्तामा एक पटक मात्र रिचार्ज गर्नुहोस्।
रफ सडकमा सवारी बिजुली स्कूटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। हामी यसलाई बुझ्दछौं र तपाईंको यात्रालाई बढी सहज बनाउँदछौं। साइकल डिजाइनबाट प्रेरणा ड्राइंग, हामीले तपाईको सवारीलाई सहज र अधिक स्थिर बनाउनको लागि चक्राई-अवशोषणको साथ १० इन्च ट्यूबलेस न्युमेटिक टायरहरू विकास गर्‍यौं, कुनै न कुनै सतहहरू वा गति बम्पहरूमा पनि।
प्रोपल्सन शक्तिमा क्रान्तिकारी अपग्रेडको साथ, अब तपाईं अधिक स्वतन्त्रता र सुविधाको मजा लिन सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो MAX मा वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ। उच्च टोक़ मोटरले MAX लाई शीर्ष भूमिमा १ 15.5..18.6-१-350.mpmph को शीर्ष गति दिन्छ। W 700०W--००W शक्तिले MAX प्रदान गर्दछ सबै प्रकारको सडक सर्तहरूमा दिगो प्रणोदनको साथ।
स्पि wheel् wheel्गे wheel्लाई बिदाइ दिनुहोस् जब तपाईंको इलेक्ट्रिक स्कूटर ठाडो ढलान माथि गइरहेको छ, MAX १ 15% वरिपरि चढाई चढ्न सक्छ, यसलाई सजिलै माथि जानको लागि अनुमति दिँदै। रियर व्हील ड्राइवले तपाईंलाई त्वरण, स्थिरता, र ब्रेकमा उत्तम समाधान प्रदान गर्दछ।
म्याक्स एक-चरण फोल्डि system प्रणालीको साथ आउँदछ जुन यसले सधैको हिसाबमा रहेका मानिसहरूलाई अन्तिम इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाउँछ। को निर्मित चार्जर तपाइँ यसलाई सजिलैसँग रिचार्ज गर्न अनुमति दिनुहुन्छ जब तपाई एक ठूलो चार्जिंग उपकरणसँग बोक्न नगरीकन जानुहुन्छ। तपाईंले भर्खर फोन चार्जिंग केबल जस्ता पॉकेटेबल कर्डको साथ ल्याउनु पर्छ। नयाँ चार्जर पहिले भन्दा बढी कुशल छ। म्याक्स charged घण्टामा पूर्ण चार्ज गर्न सकिन्छ, कुनै पनि अघिल्लो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू भन्दा दुई गुणा छिटो।
MAX सँग एक उड्डयन-ग्रेड एल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेम छ कि यसले एक मजबूत शरीर दिन्छ र साथै बोक्नको क्षमता २२० एलबीएस वा १०० केजी छ। हामीले MAX डिजाईन ईन्टरप्राइज स्कूटर सेयरिंग मार्केट दिमागमा राख्यौं। सुधारिएको संरचनाको साथसाथै अन्य फिचर अपडेटहरू जस्तै IPX220 का प्रतिरोध रेटिंग पूरै शरीरको लागि (IPX100 यसको पानीको प्रतिरोधात्मक पानी यसको कोर अवयवहरू) र विभिन्न टिकाऊपन अपग्रेडहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि MAX तपाईंको वफादार, लामो समय सेवा दिने साथी हुनेछ।
लक नियन्त्रणहरू: तपाईले आफ्नो MAX लक गर्न सक्नुहुन्छ एक एकल स्वाइपको साथ दायाँ।
स्कूटर स्थिति: तपाईंको MAX को बारे मा जानकारी प्रदर्शित गर्दछ जस्तै बाँकी माइलेज, गति
राईडिंग मोड: विभिन्न परिदृश्यहरूका लागि different बिभिन्न मोडहरूबाट छनौट गर्नुहोस्
'ECO' आर्थिक मोडल हो जुन अधिकतम १० किमि प्रति घण्टाको गति (m.२ माइल प्रति घण्टा) को हुन्छ।
'D' अधिकतम २० किमि प्रति घण्टा (१२. m मैल प्रति घण्टा) को ड्राइभ मानक ड्राइभ मोड हो।
'S' स्पोर्ट मोड हो जुन अधिकतम गति २ 25--30० किमी / घन्टा (१.15.5..18.6-१-XNUMX..XNUMX माइल प्रति घण्टा) को साथ हुन्छ।
फर्मवेयर अपग्रेडहरू: तपाईंको MAX फर्मवेयरलाई अद्यावधिक राख्नुहोस्।
समग्रमा, MAX गतिशीलताका लागि उत्तम विकल्प हो, यसले तपाईंलाई बिन्दु A बाट बिन्दु B मा जान अनुमति दिन्छ जब तपाईं खर्च गरेको समयको मजा लिनुहुन्छ। तपाईं १० माईल दैनिक यात्रा वा छोटो यात्राको साथ पनि थाक्नुहुनेछैन, र दायरा मुद्दाको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। नयाँ शहरमा सवारी गर्नुहोस् र तपाईंको शहर र गाउँहरू अन्वेषण गर्नुहोस्!
* हामी स्थानीय अधिकारबाट आवश्यकता पूरा गर्न बिभिन्न देशहरूमा बिभिन्न शीर्ष-स्पीड संस्करणहरू पठाउनेछौं।
किन ई-स्कूटर यातायात एक चम्किलो प्रवृत्ति मात्र होइन, तर टिकाऊ जीवनशैली हो?
कम ऊर्जा खपत: तथ्याics्कले इलेक्ट्रिक स्कूटरलाई ऊर्जा खपतमा ठूलो फाइदा राख्ने देखाउँदछ, अन्य सवारीहरूको तुलनामा।को
लागत-प्रभावकारी: यदि तपाई ग्यास वा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुमा इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु छान्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ।
खरीद लागत: MAX लगभग १% इलेक्ट्रिक कारको मूल्य, हरियो जानको लागि सबैभन्दा किफायती विकल्पहरू मध्ये एक।
यसको ऊर्जा खपत, प्रयोग लागत र मूल्यमा यसको किनाराको साथ हामी ग्लोबल वार्मिंगसँगको हाम्रो लडाईमा विश्वास गर्दछौं, इलेक्ट्रिक स्कूटरले हामीलाई यातायात उर्जाको बारेमा जित्ने उत्तम अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
Exc 599 at (MSRP $ 799) मा सीमित विशेष अर्ली बर्ड
हामी हाम्रो Indiegogo समर्थन गर्नेहरूलाई ठूलो छुट प्रदान गर्दैछौं, विशेष छुट र विशेष Indiegogo संस्करण सहित। अधिक तपाईं खरीद, अधिक तपाईं बचत।
इंडिगोगो समुदायले हामीलाई अत्यधिक समर्थन र हाम्रो दृष्टिको पुष्टि प्रदान गरेको छ कि महान उत्पादनहरू उत्पादन गर्न जुन मानिसहरू दैनिक प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। तपाइँको जहाँ-जहाँ सवारी भईरहेको छ तपाईंको MAX मा Indiegogo ब्याज लगाएर उत्कृष्ट उत्पादनहरूको समर्थनका लागि यस इंडिगोगो मूल्य साझेदारी गर्नुहोस्। हामी इंडिगोगो विशेष संस्करण KickScooter MAX को धेरै सीमित मात्रामा प्रस्ताव गर्दैछौं जुन आइकनिक इंडिगोगो रंगको साथ आउँदछ।
इंडिगोगो संस्करण र मानक र color संस्करणको बीचमा भिन्नता भनेको पा wheel्गो रिम्समाको र color्ग हो।
लागि 1 समीक्षा ननबोट MAX ब्ल्याक इलेक्ट्रिक ब्ल्याक स्कूटर (65km)
5.05बाट
मन्टास - 2019 11 जून
शिपिंगको लागि अतिरिक्त लागत, तर मूल्यको हिसाबले यो सियाओमी प्रो मोडेलको भन्दा राम्रो विकल्प देखिन्छ। म तपाईंको ढुवानी को लागि प्रतीक्षा गर्दैछु।
उपयोगी(2) उपयोगी छैन(2)तपाईंले पहिले नै यो मतदान गर्नुभएको छ
ONEBOT S6 इलेक्ट्रिक बाइक फोल्डिंग साइकल 250W 50km माइलेज
ONEBOT S6 इलेक्ट्रिक बाइक फोल्डिंग साइकल 250W 50km माइलेज उत्पाद जानकारी युट्यूब, ...
अर्टुर लेजर मास्टर डेस्कटप लेजर ईन्ग्रेभर कटर लेजर ईन्ग्रेभिंग मेशिन -२-बिट मदरबोर्ड लेजर GRBL नियन्त्रण सफ्टवेयर स्थापना गर्न सजिलो छ।
अर्टुर लेजर मास्टर डेस्कटप लेजर ईन्ग्रेभर कटर लेजर ईन्ग्रेभिंग मेशीन 32-बिट मदरबोर्ड लेजर ...
मूल शाओमी मी वाच १.1.78 ईन्च एमोलेड स्क्रिन G जी ईएसआईएम रिस्टब्यान्ड अनुकूलित वाच
मूल शाओमी मी वाच १.1.78 ईन्च एमोलेड स्क्रिन G जी ईएसआईएम रिस्टब्यान्ड अनुकूलित वाच विवरण ...